Amagumbi anelanga anembono emangalisayo kufutshane neLinz
Altenberg bei Linz, Oberösterreich, Austria
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguAlina
Sirenta amagumbi amabini amahle nanefanitshala kwindawo ezolileyo kufutshane neLinz eneWifi yasimahla. Amagumbi abonelela ngegadi enkulu kwaye ezolileyo apho unokuphumla kwaye wonwabele ihlobo. Indawo izolile njengoko amagumbi ajikelezwe yigadi ephangaleleyo enombono omangalisayo wentaba.
Indlu yokuqala inendawo yokuhlala eyi-98m² ilungele abantu aba-6 ukuya kwabasi-8 kwaye inendawo yokungena, ikhitshi elivulekileyo elinegumbi lokuhlala kunye nendawo yokutyela, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nebhafu, iiWC ezi-2 kunye namagumbi okulala ama-3. Isofa eyongezelelweyo ivumela ukuhlala ukuya kuthi ga kwi-8 yabantu.
Indlu yesibini inendawo yokuhlala eyi-90m² ilungele abantu aba-6 ukuya kwabasi-8 kwaye inendawo yokungena, ikhitshi elivulekileyo elinegumbi lokuhlala kunye nendawo yokutyela, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nebhafu, iiWC ezi-2 kunye namagumbi okulala ama-2. Iibhedi ezongezelelweyo ezingama-90/200 zivumela ukuba kuhlale abantu abasi-8.
Omabini amagumbi afakwe iterrace enkulu enegarten kunye nebalcony enombono omangalisayo wentaba.
Kwindlu nganye zimbini
Yonke indlu ibandakanya:
- Isipheki sombane esine-oveni
- Umatshini weEspresso
- Umdlali weBlu-Ray
-I-Intanethi / WiFi
Eyona ndawo ikufutshane yokutyela yindawo yase-Austrian Gasthaus nje imizuzu emibini yokuhamba. Ichibi elikufuphi (imizuzu emi-5 ngemoto) I-Pleschingersee ibonelela ngesiqabu esamkelekileyo ehlotyeni. Umbindi wesixeko saseLinz unokufikelelwa ngokulula ngemoto kwi-8 min.
Sihlala kwisakhiwo esinye...so ndiyakwazi ukunceda xa iiNdwendwe zifuna uncedo okanye zinemibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Altenberg bei Linz